लाभ लेनदेनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लफडा परेपछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा - Media Dabali
लाभ लेनदेनमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लफडा परेपछि अध्यक्ष पदबाट राजीनामा
काठमाडौं – कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लफडा परेपछि नेपाल बैंक लिमिटेडका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।
लाभांश वितरणमा अर्थमन्त्री पौडेलसँग विवाद भएपछि अधिकारीले आईतवार अध्यक्ष पदबाट दिएको राजीनामा सोमवार स्वीकृत भएको छ ।
सोमवार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अधिकारीले अध्यक्ष पदबाट दिएको राजनीमा स्वीकृत गरेका हुन् । सरकारी बैंकहरूले लाभांश दिँदा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने भएपनि सहमति विपरीत लाभांश पारित गरिएको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेल अध्यक्ष अधिकारीसँग रिसाएका थिए ।
नेपाल बैंकले १६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । १२ प्रतिशत बोनस शेयर र ४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय बैंकले गरेको थियो । यसमा गत आर्थिक वर्षभन्दा अगाडिको सञ्चित नाफा समेतबाट लाभांश दिने निर्णय गरिएपछि अर्थ मन्त्रालय रुष्ट भएको स्रोतले जनाएको छ ।
अन्य बैंकहरुले लाभांश वितरण गर्नु पूर्व सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । राष्ट्र बैंकको अनुमतिपछि पनि साधारण सभाबाट पारित भएपछि मात्रै बैंकहरूले शेयर धनीलाई लाभांश दिने गरेका छन् ।
सरकारी बैंक भएका कारण लाभांश वितरण गर्न अर्थ मन्त्रालयबाट समेत सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको फाइल रोकिएपछि विवाद सिर्जना भएको हो ।
कोरोनाको आशंकामा विष्णु पौडेल आइसोलेसनमा
ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउँदै, बामदेवलाई के ?
१५ दिन भित्रै फेरिँदै मन्त्री, विष्णु पौडेल अर्थ र जनार्दशन शर्मा गृहमन्त्री बन्ने पक्का !
नेकपाका विष्णु पौडेल बने नयाँ अर्थमन्त्री
बालुवाटार काण्डमा विष्णु पौडेललाई पुरस्कार, विजय गच्छदारलाई अख्तियार
शनिवार, कार्तिक १ २०७७१२:५१:५०
# विजय गच्छदार # विष्णु पौडेल